मंसिर ५ देखि मतदाता शिक्षा - Pradesh Today
Homeमुख्य खबरमंसिर ५ देखि मतदाता शिक्षा
घोराही, २७ कार्तिक । मतदाता शिक्षाको लागि ५२ जना कर्मचरी खटाईने भएको छ । मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कर्मचारी खटाइने भएको हो । उपनिर्वाचनमा मतदाताहरूले हालेको मत बदर नहोस् भन्नको लागि मतदाताहरूलाई मतदाता शिक्षा दिनको लागि कर्मचारी खटाउन लागेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
यही मंसिर ५ देखि १२ गतेसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गर्न लागिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जिल्ला निर्वाचन अधिकारी बुद्धि खत्री बताएका छन् । उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्र नं.२ (ख) मा र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का मतदाताहरूलाई मतदाता शिक्षा दिन लागेको हो । त्यहाँका मतदाताहरूलाई मतदान किन गर्ने ? कसरी मतदान गर्ने ? मतदान गरिसकेपछि मतपत्र कसरी पट्याउने ? र मतपत्रको नमुनामा नमुना मतदानसमेत गरिने उनले बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १६ मा ४ हजार ४ सय ५३ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन क्षे नं. ३ (ख) मा ६८ हजार ७ सय १९ जना मतदाता रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
२६ वटा वडाको लागि मतदान शिक्षा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । त्यहाँको मतदाताहरूलाई मतदान शिक्षाको लागि ५२ जना कर्मचारीहरू खटाईने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी खत्रीले बताए । मतदाता शिक्षाको लागि २ लाख ३४ हजार रूपैयाँ बजेटसमेत छुटाइएको छ ।
एक वडामा दुईवटा कर्मचारी खटाईने छन् भने एक कर्मचारीले ४ हजार ५ सय को दरले भत्ता उपलब्ध गराईने छ । २६ वटा वडाको लागि ५२ जना कर्मचारी खटाउने तयारी भएको खत्रीले बताए ।
प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक, प्रारम्भीक बालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा ग्रामीण महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूले मतदाता शिक्षा दिने उनले बताए । कम्तीमा पनि एसईई पास गरेका नेपाली व्यक्तिहरू मार्फत मतदाता शिक्षा प्रदान गरिने भएको छ ।
विगतको निर्वाचनको समयमा मतदाताहरू धेरैजसो मत बदर भएको थियो । आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि मत बदर नहोस् भन्नको लागि प्रभावकारी रूपमा मतदान शिक्षा कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
त्यसैगरी उपनिर्वाचनका लागि ४ सय ५० जना कर्मचारी खटिने भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, सहयोगी गरेर ४ सय ५० कर्मचारी खटिने भएका हुन् । जिल्लाका दुई निर्वाचन स्थानका ३४ निर्वाचन स्थललाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कर्मचारीहरू खटाईने मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताए ।
जिल्लामा एक प्रदेशसभा सदस्य र एक वडा अध्यक्षका लागि दुई स्थानमा ३४ मतदान स्थल र ४२ मतदान केन्द्रहरू तोकिएको छ । ति केन्द्रहरूमा कर्मचारी खटाईने तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडसमेत गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (ख) मा प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुँदैछ भने निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (२) मा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ को वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन हुँदैछ । सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफनो उम्मेदवारको टुङ्गो लगाईसकेर प्रचार प्रसारमा होमिएका छन् ।